Aagga ganacsiga xorta ah ee Jabuuti oo wajigiisa hore la furay - BBC News Somali
Aagga ganacsiga xorta ah ee Jabuuti oo wajigiisa hore la furay
5 Luulyo 2018
Lahaanshaha sawirka Mohamoud Osman Boulhan
Image caption Xarunta caalamiga ee ganacsiga xorta ah ee Jabuuti
Wajiga hore ee aagga ganacsiga xorta ah ee jabuuti ee Shiinuhu dhisayo, kaasoo ah kan ugu weyn Afrika, ayaa maanta laga furay Jabuuti. Hogaamiyayaasha gobolka ayaa isugu tegey waddankaas ku yaalla geeska Afrika si ay uga qayb qaataan munaasabadda furitaanka aaggaas.
Aagga ganacsiga xorta ah ee Jabuuti ayaa la filayaa inay soo marto badeecad qiimaheeda lagu qiyaasayo 7 bilyan oo Doollar, muddo laba sano gudaheed ah, uuna abuuro ilaa 15,000 oo shaqo, marka la dhamaystiro.
Image caption Madaxda oo loo sharraxayo sida uu aagga xorta ah u shaqeeyo
Shirkadda ugu weyn ee adeegga dekedaha Shiinaha ayaa ka shaqayanaysa dhismaha mashruucaas, wuxuuna qayb ka yahay qorshe weyn oo oo loogu magac daray "hal meegaar, hal waddo", kaasoo ah hindise maalgashi oo ka socda ilaa 60 dal.
Image caption Madaxweyne Geelle, madaxweyne Kagame iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed
Aagga ganacsiga xorta ah oo baaxadiisu gaarayso 48.2 KM, ayaa 10% ka mid ah waxay tahay hantida ma guurtada ah ee Jabuuti, waxaana ay hoy u noqon doontaa tas-hiilaadka xagga waxsoosaarka, gaadiidka, iyo kaydka.
Image caption Aagga ganacsiga xorta ah ee jabuuti oo dusha laga sawiray
Waxay kaloo Jabuuti qorshaynaysaa inay marin u noqoto khayraadka dabiiciga ah ee dalalka South Sudan, Soomaaliya iyo gobolka harooyinka waaweyn oo iyadu aysan haysan.
Maalgashiga uu Shiinuhu ku samaynayo Jabuuti dhawaanahan waxaa kaloo ka mid ah garoon caalami ah oo cusub, khad tareen, iyo dhuun biyaha macaan u qaadda Itoobiya.